कति सम्मको प्यान विल काट्ने सहित करका तीन प्रश्न- माघ २६, २०७४ | Nepal Tax Online | Tax Resource, Expertise & Insights
कति सम्मको प्यान विल काट्ने सहित करका तीन प्रश्न- माघ २६, २०७४
फेसबुकको Nepal Tax नेपाली करग्रुपमा उठेका प्रश्नहरु मध्ये तीन प्रश्नको जवाफ नियमित रुपमा हामी यहाँ दिने छौ ।
कति सम्मको प्यान विल काट्न पाईन्छ?
मैले कम्प्युटरबाट विलिङ गर्न के गर्नुपर्छ?
कारोबारको सिलसिलामा विद्युतिय माध्यमबाट विजक जारी गर्न चाहने व्यक्तिले सो माध्यबाट विजक जारी गर्नुपुर्व सम्बन्धित कर कार्यालयबाट अनिबार्य अनुमति लिनुपर्नेछ । कसैले अनुमति नलिई विद्युतिय माध्यमबाट विजक जारी गरेको पाईएमा प्रचलित कानून अनुसार कारबाहि हुन्छ ।
त्यसरी विजक जारी गर्ने स्विकृति लिनलाई तपाईको सफ्टवेयरले विभागले तोकेका मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्दछ । कम्प्युटरबाट जारी गर्ने विजकको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विभागले “विद्युतिय विजक सम्बन्धि कार्यविधी,२०७४” जारी गरेको छ । सो कार्यविधि नेपाल ट्याक्स अलाईनमा पाउन सक्नुहुन्छ ।
एक पटक कम्प्युटरबाट विजक जारी गर्न स्विकृति लिईसकेपछि,विद्युतिय विजक जारी गर्न नसकेको अवस्थामा निज करदाताले कर कार्यालयको अग्रिम स्विकृति लिएर मात्र अन्य माध्यमबाट विजक जारी गर्न सक्नुहुन्छ ।
छुट रकम भ्याट अघि कि भ्याट पछि?
करदाताले तोकेको मुल्यमा क्रेतालाई केहि रकम छुट दिन सक्दछ । वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा मूल्यमा दिईएको डिस्काउण्ट,कमिशन वा यस्तै अन्य व्यापारिक छुटको रकमलाई कर लाग्ने मूल्यमा समावेश गरिदैन । सामान्यतयाः छुट दिई बचेको रकममा भ्याट लगाईन्छ । तर विभागले खुद्रा मुल्य सार्वजनिक गर्ने गरी तोकेको सामानको हकमा भने सार्वजनिक भएको मुल्यभन्दा कममा विक्रि गर्दा भने सार्वजनिक भएकै मुल्यमा भ्याट उठाउनु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा भ्याट पछिको मुल्यमा छुट दिनु पर्दछ ।